सागर बुढाथोकी १२ पुस, काठमाडौं । ११ वर्षीय छोराले साबुन पानीले बारम्बार हात धोएको भन्दै महाराजगञ्जका एक अभिभावक बालरोग विशेषज्ञ कहाँ पुगे । बालरोग विशेषज्ञले कान्ति बाल अस्पतालको मानसिक विभाग युनिटमा रिफर गरे । अनौठो लक्षण देखाएका छोरालाई उपचार गर्नुको सट्टा मानसिक विभागमा पठाउँदा अभिभावकलाई ती विशेषज्ञसँग रिस नउठेको होइन । तर मानसिक विभागका चिकित्सकले भनेपछि थाहा भयो-आवश्यकता भन्दा बढी साबुन पानीले हात धुने समस्या मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको रहेछ ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को डरका कारण ११ वर्षीय बालकमा समस्या देखिएको चिकित्कले बताए । टेलिभिजनमा आउने कोरोना सम्बन्धी समाचार र घर बाहिर निस्कन नपाउँदा बालकको मनमा डरले डेरा जमाएको रहेछ । महामारीकालमा उनी जस्तै अधिकांश बालबालिका घरमै थुनिए, टेलिभिजन र इन्टरनेटमा व्यस्त भए । त्यसले उनीहरूमा मानसिक समस्या देखिएको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् । मनोचिकित्सकहरू ओसीडी (अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर) भएका बेला बारम्बार हात धुने समस्या देखिने बताउँछन् ।
बच्चाहरूमा अध्याधिक इन्टरनेट प्रयोगको असरले ‘एनोरेक्सिया’ जस्ता मानसिक समस्या देखिएको कान्ति बाल अस्पतालको मानसिक विभाग प्रमुख डाक्टर अरुणराज कुँवर बताउँछन् । ‘एनोरेक्सिया भनेको खाना खानै मन नगर्ने रोग हो’ नेपालका पहिलो बाल साइक्याट्रिक कुँवर भन्छन्,’ ‘यस्ता रोग लागेका बच्चाहरूले आफू जति दुब्लो भएपनि मोटो नै छु भनेर सोच्छन् र अझै दुब्लाउन प्रयास गर्छन् ।’ पहिला पश्चिमा मुलुकमा धेरै देखिने यो रोग अहिले नेपालजस्ता विकासशील देशमा पनि बढेको कुँवर सुनाउँछन् । पहिला यस्तो लक्षण भएका विरामी एकाध आउने गरेको तर अहिले हप्ता-हप्तामै आउने गरेको कुँवरले जानकारी दिए । कुँवर भन्छन्, ‘नेपालमा बालबालिकालाई मानसिक समस्या बढेको देखाउने यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो ।’
मानसिक रोग उपचारमा संग्लग्न चिकित्सकहरूका अनुसार आत्महत्याको सम्बन्ध मानसिक रोगसंग जोडिएको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत वयस्क मानिसलाई देखिने मानसिक समस्या १४ वर्षअघि नै सूरू हुन्छ । सात/आठ वर्षका बालबालिकालाई मानसिक समस्याले सताउनु निकै खतरनाक हुने कुँवरको कथन छ । किनभने यो उमेरका बालबालिकाले आˆनो समस्या व्यक्त गर्न सक्दैनन र, उनीहरूमा आएको परिवर्तन हेरेर यस्ता समस्या थाहा पाउन सकिन्न । वयस्कहरूमा जस्तै बालबालिकामा पनि डिप्रेसन, एन्जाइटी, ओसीडी लगायतका मानसिक समस्या देखिने गरेको डा. गंगा पाठक बताउँछिन् । उनका अनुसार डिप्रेसन भएका बालबालिका सामान्य कुरामै रिसाउने, झर्को मान्ने, नियमित काममा अरुचि देखाउने हुन्छन भने एन्जाइटी भएमा विना कारण आत्तिने, डराउने, स्कूल जान नमान्ने हुन्छन् ।
यस्तै तीन/चार वर्षको उमेरदेखि देखिन सक्ने ओसीडी भएका बालबालिकाले एउटै कुरा बारम्बार सोधिरहने, कुनै काम गर्न शुरू गरेपछि एकोहोरो गरिरहने गर्छन् । ‘मानसिक तनावकै कारण बालबालिकाले सानै कुरामा प्रतिक्रिया जनाएर अनपेक्षित घटना हुने क्रम बढ्न थालेको छ’ पाठक सुनाउँछिन् ।
डरलाग्दो बाल आत्महत्या
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस सुरु भएको चैत महिनादेखि कात्तिकसम्म ८३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यसमध्ये ३८ जना बालबालिका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ हजार ७५४ जनाले हत्याहत्या गरेको प्रहरीको अभिलेख छ । जसमध्ये २९० जना १२ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । त्यस्तै, आब ०७४/०७५ मा ५ हजार ३१७ जनाले आत्महत्या गर्दा २५० जना त्यही उमेर समूहका बालबालिका थिए । ०७३/०७४ मा ५ हजार १२४ आत्महत्याका घटनामध्ये ३०४ वटा घटनामा बालबालिका थिए । दुई दशकदेखि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शमा दिँदै आएकी पाठक कोरोना महामारी कालमा पहिला भन्दा दोब्बर मानसिक परामर्श दिएको बताउँछिन् । ‘किशोर किशोरीको आत्महत्या प्रयासका घट्ना गएको ६/७ महिनामा धेरै हेर्नुपर्‍यो’ पाठक भन्छिन्, ‘पहिला यति डरलाग्दो घट्ना देखिएको थिएन ।’
डा. कुँवर चाहिँ महामारीकालमा देखिएको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई भूकम्पसँग तुलना गर्छन् । मानसिक समस्याको कारण धेरै मानिसको ‘बिल्लिबाठ’ भएपनि समाजले नजरअन्दाज गरिरहेको उनको अनुभव छ । मानसिक समस्याका कारण वर्षेनी ५-६ हजारले आत्महत्या गर्दा पनि यसलाई गम्भीरतापुर्वक नलिइनु दुखद रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार महामारी सूरू हुनुअघि औसतमा दैनिक १३ देखि १५ जनाले आत्महत्या गर्थे । अहिले त्यो बढेर १७ देखि १९ मा पुगेको छ । यही तथ्यांकलाई नजरअन्दाज गर्दा समाजमा भित्रभित्रै मानसिक समस्याको भूकम्प गएको डा. कुँवर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बालबालिका र युवाहरू हरेक वर्ष आत्महत्या गरेर मरिहरनु सामान्य भूकम्प होइन ।’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (एनएचआरसी)ले जनवरी २०१९ देखि जनवरी २०२० सम्म नेपालका सातै प्रदेशमा गरेको मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार १६ वर्ष उमेर समूहका ७.७ प्रतिशत र १७ वर्षका ६.६ प्रतिशतमा मानसिक समस्या देखिएको छ । एनएचआरसीको सर्वेक्षणमा ९२०० जना १८ वर्ष माथिका र ५ हजार ८८८ जना १३ देखि १७ वर्ष सम्मका किशोरकिशोरी सहभागी थिए । लैंगिक हिसाबले किशोरीहरूमा बढी समस्या देखिएको छ । ५.३ प्रतिशत किशोरीमा र ५ प्रतिशत किशोरमा मानसिक समस्या देखिएको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । सर्वेक्षणमा ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरी मानसिक समस्या रहेको, ०.६ प्रतिशतमा उदासीनता, ३.९ प्रतिशतमा हालको अवस्थामा आत्महत्याको सोच रहेको उल्लेख छ ।सर्वेक्षणका अनुसार प्रदेश १ का किशोरकिशोरीमा मानसिक समस्या बढी (११.४ प्रतिशत) छ ।
कतिपय यस्तो समस्या आफैं निको हुन्छ होला भन्ने सोचाइले चिकित्सको परामर्शका लागि नजाने गरेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ । धेरै मानिस भने मानसिक रोग पनि अरु रोग जस्तै हो भन्ने नबुझेर मनोचित्सक कहाँ नजानेर गरेको जानकारहरू बताउँछन् । २३ प्रतिशत वयस्कले आफूमा लक्षण देखिएपश्चात चिकित्सक वा अन्य व्यक्तिसँग सहयोग मागेको देखिएको छ । मानसिक समस्या देखिँदा कसैले जोखाना हेर्न, पूजाआजा र धामीझाँक्री लगाउने गरेको पाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘धेरै जसो धामीझाँक्री वा अन्य उपाय गर्दा निको नभएपछि हामी कहाँ आएका हुन्छन्’ डा. कुँवर भन्छन् । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरुले बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा गहन अनुसन्धान गरेका छैनन् ।
केही संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षणमा १० प्रतिशत नेपाली बालबालिकालाई डिप्रेशन छ भन्ने देखाएको थियो । त्यस्तै त्यही अध्ययनमा दुई प्रतिशत बालबालिकामा ‘एञ्जाइटी’ भएको भनिएको छ । एक अन्तराष्ट्रिय अध्ययनले १५ देखि २० प्रतिशत बालबालिकामा मानसिक समस्या देखिने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि गहन र विश्वसनीय अनुसन्धान नभएकाले नेपालमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सधै नै नजरअन्दाजमा परिरहेको कुँवर बताउँछन् । बालबालिकमा देखिएको मानसिक समस्याले वयस्क हुदाँसम्म सताउने विभिन्न अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । त्यसैले पनि समयमै रोग पहिचान गरेर निको पार्न सके मानसिक रोगको असर कम हुने मनोचिकित्सकहरु बताउँछन् ।
डिजिटल लतको खतरा
‘मेरो बच्चालाई मोबाइल भएपछि अरु केही चाहिँदैन, मोबाइल भएन भने त भातको गास नै हाल्दैन’ यो, आमअभिभावकको गुनासो हो । डा. गंगा पाठक बालबालिकालाई मानसिक समस्या जन्माउने कारण नै ‘डिजिटल एडिक्सन’ भएको बताउँछिन् । महामारीका बेला घरबाट बाहिर निस्किन नपाउँदा यस्तो लत झनै बढेको उनको विश्लेषण छ । साइबर बुलिङका कारण मानसिक समस्या भोगिरहेका बालिकालाई काउन्सिलिङ गरिरहेकी पाठक भन्छिन्, ‘महामारीकालमा साइबर बुलिङ भोगेका बालबालिकाको अनुभव विभत्स छ, जसले उनीहरूमा मानसिक समस्या देखाएको छ ।’(स्रोतः अनलाईनबाट)
एनल फिसर : एनल फिसरको कारण र जोखिमका कारक
देशभर आज सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा